Ukulungiselelwa kwesampula ngaphambi kokuhlaziywa kungadinga izinqubo ezahlukahlukene zangaphambi kokuhlaziywa ezinjenge-homogenization yezicubu, i-lysis, ukukhishwa kwamaprotheni, i-DNA, i-RNA, i-organelles nezinye izinto ezingaphakathi kwamangqamuzana, ukuqedwa nokususwa. IVialTweeter iyidivayisi eyingqayizivele ye-ultrasonic elungiselela amashubhu amaningi wesampula ngasikhathi sinye ngaphansi kwezimo ezifanayo. Ngenxa yokwehlukaniswa okungaqondile kwamashubhu wokuhlola avaliwe, ukungcoliswa okuphambene nokulahleka kwesampula kuyagwemeka.
I-Ultrasonication inqubo ejwayelekile yokwelashwa kwesampula ukuze isampula ilungele ukuhlaziywa njenge-polymers chain reaction (PCR), i-Western Blots, ukuhlolwa, ukulandelana kwamangqamuzana, i-chromatography njll. ngokuhlaziya. Inzuzo enkulu ye-sonication ukuthi isimiso sokusebenza se-ultrasound sisekelwe emandleni emishini kuphela. I-Ultrasonic lysis nokuphazanyiswa kwamaseli kutholakala ngamandla we-sonomechanical shear, okunikeza i-ultrasonication inzuzo yokuthi izixazululi ezisetshenziselwa ukukhipha amaprotheni zingasetshenziswa futhi ngesikhathi se-lysis. Iziphazamisi zeseli ze-Ultrasonic ezifana ne-VialTweeter ziphula izindonga / ulwelwesi lwamaseli futhi zikhuthaze ukudluliswa kwesisindo phakathi kweseli elingaphakathi ne-solvent. Ngaleyo ndlela, i-analyte (isb. I-DNA, i-RNA, amaprotheni, ama-organelles njll.) Idluliswa kahle isuka kumatrix eseli iye ku-solvent. Lokhu kusho ukuthi izinyathelo zokucima nokukhipha ziyahlangana ngenqubo yokuphazanyiswa kwamaseli e-ultrasonic, eyenza i-ultrasonic lysis iphumelele kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ukulungiswa kwesampula ye-ultrasonic akudingi okokuhlanza kanye namanye ama-reagents e-lysis, angahle aguqule futhi aqede isakhiwo se-lysate futhi saziwa ngezinkinga ezalandela ngokuhlanzwa. Enye indlela ye-lysis, ukuphazanyiswa kwe-enzymatic kudinga izikhathi ezinde zokufukamela futhi kuletha imiphumela engakhiqizi njalo. Ukulungiselela isampula ye-Ultrasonic kunqoba izinkinga ezivamile ekulungisweni kwesampula njengokucushwa kwe-homogenization, ukuphazanyiswa kwamaseli, i-lysis, ukukhishwa kwamaprotheni kanye ne-lysate solubilization. Njengoba ukuqina kokwelashwa kwe-ultrasonic kungalawulwa ncamashi futhi kulungiswe kwisampula yebhayoloji, ukonakala kanye nokulahleka kwesampula kuyagwenywa. Ukuqashelwa nokulawulwa kwesampula okuzenzakalelayo, imodi ye-pulse kanye nobude be-sonication kuqinisekisa imiphumela emihle.
IVialTweeter ilungele ikakhulukazi umsebenzi waselebhu odinga ukulungiswa ngasikhathi sinye kwamasampuli amaningi ngaphansi kwezimo ezifanayo. I-VialTweeter iyi-sonotrode yebhlokhi ye-ultrasonic engabamba izitsha ezifika kwezingu-10 (isb. I-Eppendorf, i-centriguge, amashubhu e-NUNC, ama-cryo-vials) futhi iwaqinisa kakhulu ngaphansi kwezimo ezilawulwa ngokunembile. Njengoba amandla e-ultrasonic ahlanganiswa nezindonga ze-vials zibe yisampula medium, izitsha zigcina zivaliwe ngesikhathi sokwelashwa. Ngaleyo ndlela, ukulahleka kwesampula nokungcoliswa okuwelekile kugwenywa ngokuphelele.
I-Ultrasonic sampuli prep unit Vial I-VialTweeter i-sonotrode ku-processor ye-ultrasonic UP200St
Amabhodlela kanye namashubhu afaka i-VialTweeter
I-VialTweeter ikulungele ukubamba amashubhu ayi-10 ayindilinga ayindilinga noma ajikeleze phansi njenge-Eppendorf, i-centrifuge, ama-cryo-vials nezinhlobo ezahlukahlukene ze-NUNC, kepha izimbobo zingenziwa ngezifiso kwezinye izitsha ze-vial kanye ne-tube uma uceliwe. Sicela usazise ukuthi yiluphi uhlobo lwamashubhu wokuhlola ofuna ukuwasebenzisa ukuze sikwazi ukuguqula i-VialTweeter yakho ngokufanele. Kumashubhu amakhulu wokuhlola anjengamashubhu we-Falcon nezinye iziqukathi zokuhlola, ama-beaker nemikhumbi, i-VialPress yisixazululo esikahle.
Ngenkathi i-VialTweeter ngokwayo inezimbobo zayo eziyishumi zamashubhu isivele iyidivayisi eyingqayizivele futhi esebenza kahle kakhulu ye-ultrasonic, i-addial on VialPress yenza iVialTweeter isebenzisane kakhulu futhi iguquguquke ukusebenza. I-VialPress iyinsiza ye-VialTweeter equkethe ibha yokuqinisa evumela ukulungisa amashubhu amakhulu wesampula njengamashubhu we-Falcon noma amanye ama-beaker wokuhlola aphakathi naphakathi kuya ngaphambili kwe-VialTweeter. Isithombe ngakwesobunxele sikhombisa i-VialTweeter ephethe izitsha eziyi-10 ze-Eppendorf ebhlokini, kanti i-VialPress ilungisa ithubhu eyodwa yokuhlola enkulu ngaphambili ukuze yenziwe i-sonication. I-VialPress iyakwazi ukubamba amashubhu wokuhlola amakhulu ama-5 we-sonication enamandla.
Izivumelwano Zokulungiselela Isampula ze-VialTweeter
I-VialTweeter isetshenziswa kakhulu ukuveza amasampula wezinto eziphilayo. Ngaphambi kokuhlaziywa, amasampuli kufanele alungiselelwe ukuhlaziywa kwamakhemikhali noma kwe-biophysical kanye nokuhlolwa, isib. Nge-lysis, izicubu ze-homogenization, ukukhishwa kwamaprotheni, i-DNA / i-RNA shearing, i-degassing njll. I-VialTweeter ifeza lezi zinqubo ze-ultrasonic ngokuthembekile futhi iletha imiphumela yokuzala kabusha. Ukusetshenziswa okujwayelekile kwe-VialTweeter ukuphazanyiswa kwe-lysis / cell kwezicubu zamamalia (zabantu nezilwane) kanye namaseli amabhaktheriya nezinhlayiya zegciwane. Amasampula webhayoloji aphethwe kahle afaka amaseli womuntu wamaphaphu, amaseli we-haematopoietic stem, amaseli we-myeloid leukemia, Escherichia coli, I-Bacillus subtilis, I-Bacillus anthracis, UFrancisella tularensis, Yersinia pestis, IStreptococcus pyogenes, I-Caulobacter crescentus, I-Mycoplasma pneumoniae, i-mycobacteria / Mycobacterium isifo sofuba (i-MTBC) namanye amangqamuzana amaningi wegciwane, ama-botanical kanye nama-microbial.
Ngezansi, ungathola izivumelwano ezimbalwa ezikhethiwe eziqukethe i-VialTweeter.
I-VialTweeter sonicates 1.0, 1.5 kanye ne-2.0mL Eppendorf amashubhu ngamandla amakhulu ngaphandle kokungcola okuphambene noma ukulahleka kwesampula.
ukuphazamiseka kweseli & lysis
Ukuncibilikiswa kwesikhumba se-pellet
E. Coli Lysis Nge-VialTweeter Yokunqunywa kwe-In-Vivo Glutathione
Ama-Escherichia coli bacteria obunzima be-MG1655 akhuliswe ku-MOPS medium medium ngevolumu ephelele ye-200ml kwaze kwafinyelelwa ku-A600 ka-0.5. Isiko lahlukaniswa laba ngamasiko angama-50-ml ekwelashweni kwengcindezi. Ngemuva kwe-15 min of incubation with 0.79 mM allicin, 1 mM diamide, or dimethyl sulfoxide (control), amaseli avunwa ku-4,000g ku-4 ° C ngemizuzu eyi-10. Amaseli ahlanzwa kabili nge-KPE buffer ngaphambi kokuvuselelwa kwamaphilisi ku-700µl we-KPE buffer. Ngokuncishwa amandla, i-300µl ye-10% (w / v) i-sulfosalicylic acid ingezwe ngaphambi kokuphazanyiswa kwamaseli yi-ultrasonication (3 x 1 min; VialTweeter ultrasonicator). Ama-supernatants aqoqwe ngemuva kwe-centrifugation (30 min, 13,000g, 4 ° C). Ukugxilwa kwe-Sulfosalicylic acid kwehlisiwe kwaba ngu-1% ngokufakwa kwamavolumu ama-3 we-KPE buffer. Izilinganiso ze-glutathione ephelele ne-GSSG zenziwa njengoba kuchaziwe ngenhla. Ukugxilwa kwe-cellular glutathione kubalwe ngokususelwa kumthamo wamaseli we-E.coli we-6.7 × 10-15 litre kanye nobukhulu beseli le-A600 0.5 (elilingana nesiko le-1 × 108 amaseli ml-1). Ukugxila kwe-GSH kubalwe ngokususa okungu-2 [GSSG] kusuka ku-glutathione ephelele. (UMüller et al. 2016)
I-Cell Lysis ene-VialTweeter ngaphambi kwe-Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry
I-Bacillus subtilis 168 (trpC2) ivezwe kumaminithi ayi-15 okuxineka ngama-antibiotic, kwase kuvunwa amaseli ku-3,320 xg, yagezwa kahlanu nge-100 mM Tris / 1 mM EDTA, pH 7.5, yaphinde yabuyiselwa ku-10 mM Tris, pH 7.5 yaphazanyiswa yi-ultrasonication ku-Hielscher VialTweeter insimbi. (UWenzel et al. 2014)
Ukulungiselela Isampula ye-VialTweeter ngaphambi kweMisa Spectrometry
Ama-pellets amaseli e-lyophilized wamaseli we-CD34opo hematopoietic stem / progenitor amangqamuzana aphinde avuselelwa ngo-10µ􏰇l (200µl ngenqwaba ye-HEK293 yokulungiselela uchungechunge lwe-peptide dilution) ka-8 M urea ku-100 mM ammonium hydrogen carbonate futhi yasizwa ngokuncedwa yi-sonication nge-Hielscher VialTweeter ngobubanzi obungu-60%, umjikelezo ka-60% nobude bama-20s izikhathi ezintathu ngokupholisa okuphakathi nendawo eqhweni. (U-Amon et al. 2019)
Izivumelwano Zokulungiselela Isampula zisebenzisa i-VialPress
I-lettuce entsha (i-Lactuca sativa) yenziwe yahlanganiswa ngo-0.5 M HEPES buffer (i-pH 8, i-KOH ilungisiwe) ngesilinganiso sesitshalo esingu-1 g (isisindo esisha) kuya ku-200, 100, 50, noma isisombululo se-20 mL buffer. Isilinganiso sesisindo sesitshalo kuya kumthamo wesixazululo sesixazululo sasihlukahlukene ukugcina umthamo ophelele we-homogenate phakathi kuka-3.5 no-12 mL. Isilinganiso sobukhulu besitshalo kuya kumthamo wesixazululo sesixazululo sasihlukahlukene ukugcina umthamo ophelele we-homogenate phakathi kuka-3.5 no-12 ml, uvumela i-homogenization ne-probe. Ama-Homogenates abe eseba ne-ultrasonication engaqondile esebenzisa i-UP200St ene-VialTweeter efakwe i-200xt VialPress (i-Hielscher Ultrasonics GmbH, eJalimane) ngemizuzu emi-3 (80% ye-pulse kanye ne-100% yamandla). Ukusebenzisa le divayisi kugweme ukungcoliswa. (ULaughton et al. 2019)
I-VialTweeter enezitsha eziyi-10 ze-Eppendorf ku-processor ye-ultrasonic UP200St
Ukulawulwa Kokushisa Okuthembekile ngesikhathi se-Sonication ne-VialTweeter
Izinga lokushisa liyinto ebalulekile ethonya inqubo ebaluleke kakhulu ekwelapheni amasampuli emvelo. Njengawo wonke amasu wokulungiselela isampula, i-sonication idala ukushisa. Kodwa-ke, izinga lokushisa lamasampuli lingalawulwa kahle lapho usebenzisa i-VialTweeter. Sikunikeza izinketho ezahlukahlukene zokuqapha nokulawula ukushisa kwamasampuli akho ngenkathi uzilungiselela nge-VialTweeter neVialPress ukuze zihlaziywe.
Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-VialTweeter
I-VialTweeter iyi-sonotrode yebhulokhi eyenziwe nge-titanium engabamba izingqayi ezifika ku-10 emigodini engaphakathi kwebhulokhi. Ngokwengeziwe, amashubhu wokuhlola amakhulu ama-5 angafakwa ngaphambili kwe-VialTweeter kusetshenziswa i-VialPress. I-VialTweeter yakhelwe ngendlela yokuthi amandla e-ultrasonication asatshalaliswa ngokufanayo kusitsha ngasinye esifakiwe ukuqinisekisa imiphumela ethembekile nefananayo ye-sonication. I-pivot encane ilungisa i-sonialode ye-VialTweeter ibe yindawo engalingani futhi iqondanise amashubhu wokuhlola aqonde mpo.
Amplitude ashintshekayo kusuka 20 kuya 100%
IVialTweeter inikwa amandla yi UP200St, i-200 watts processor enamandla ye-ultrasonic. I-UP200St ifakwe isoftware ehlakaniphile evumela ukulawula okuqondile phezu kwayo yonke imingcele yenqubo ye-ultrasonic ebalulekile njenge-amplitude, isikhathi sonication, pulsation, kanye nezinga lokushisa. Lokhu kwenza i-VialTweeter ithuluzi elithembekile lemiphumela yenqubo ephumelelayo yokuzala kumalabhorethri wezinto eziphilayo kanye namakhemikhali.
I-Amplitude ingashintshwa phakathi kuka-20 no-100% futhi ivumela ukuthi kube njalo ukuvumelanisa amandla we-ultrasonic kwisampula sakho. Isibonelo, ukugunda nokuqhekeka kwe-DNA ne-RNA kudinga ukuphakama okuqinile ukuvimbela ukukhiqizwa kwezingcezu ze-DNA ezincane kakhulu, ukuhlanganiswa kwezicubu zobuchopho begundane kudinga ukuqina okukhulu kwe-sonication. Khetha i-amplitude ekahle, ukuqina kwe-sonication nobude besikhathi ngemenyu ehlakaniphile nenembile ku-processor ye-UP200St. Imenyu nezilungiselelo zingafinyeleleka kalula futhi ziqhutshwe ngesibonisi sokuthinta esinemibala. Kuzilungiselelo ungasetha ngaphambilini imingcele ye-sonication efana ne-amplitude, imodi ye-pulsation / umjikelezo, ubude be-sonication, ukufakwa kwamandla okuphelele, nemikhawulo yokushisa. Kucwaningo nokukhiqiza, ukuphindeka kwezilingo nemiphumela yokuhlola kubalulekile. Lokhu kusho ukuthi ukurekhodwa okuqondile kwezimo zenqubo kanye nezivumelwano ze-sonication kubaluleke kakhulu. I-othomathikhi yedatha yokubhala idatha ibhala yonke idatha ye-sonication efayeleni le-CSV kwi-SD-khadi ehlanganisiwe ukuze ukwazi ukuhlola kalula futhi uqhathanise ama-run ahlukahlukene we-sonication. Yonke idatha yenqubo ye-ultrasonic ingafinyeleleka kalula futhi yabelwe njengefayela le-CSV.
I-Hielscher Ultrasonics izama ukukunikeza ubuchwepheshe obuthuthukisiwe ukwenza lula nokwenza ngcono umsebenzi wakho wocwaningo!
VialTweeter nge VialPress for sonication engaqondile.
Ukucubungula kwe-Ultrasonic: I-Hielscher ikusiza kusukela ekusebenzeni nasekusebenzeni okuhle ekukhiqizeni kwezebhizinisi!